Twitch ambanin'ny afo taorian'ny fampidirana sokajy vaovao antsoina hoe 'Pools, Hot tubs and Beaches' stream - Pop-Kolontsaina
Twitch ambanin'ny afo taorian'ny fampidirana sokajy vaovao antsoina hoe 'Pools, Hot tubs and Beaches' stream
Twitch dia nirehitra tamin'ny herinandro lasa teo momba ny vola fanampiana sy fandrarana ny streamers izay miditra ao amin'ny Twitch avy amin'ny dovena mafana, manome karazan-atiny maro ho an'ny mpijery, mandritra ny fotoana anaovany ny akanjo fidiany. Fa kosa, amin'ny tranga sasany, ilay antsoin'izy ireo hoe akanjony fandroana.
Manana fanavaozana ny zavatra rehetra Hot Tubs, fiatoana doka ary safidin'ny atiny izahay. Vakio ny bilaogy raha te hahalala bebe kokoa: https://t.co/C5h7MMdAae
- Twitch (@Twitch) 21 Mey 2021
Mitohy ny vavahady mafana-tub an'i Twitch
Ora vitsy lasa izay, namoaka lahatsoratra bilaogy Twitch ny tompon'andraikitra Twitch mikasika ny eritreritr'izy ireo farany sy ny politikany nohavaozina ho an'ireo mpamorona izay te-hiala amin'ny farihin'izy ireo, fandroana mafana na mandritra ny morontsiraka eo an-toerana. Niaiky i Twitch fa tsy mazava araka ny mety ho izy ireo ny politikany raha ny amin'ny famaritana ny votoaty mamoa fady no nataon'izy ireo ary nanao fanitsiana izy ireo tamin'ny ezaka fanampiana.
Ao anatin'io fofonaina io ihany, dia nanasongadina ihany koa i Twitch fa matetika ny vehivavy dia aseho amin'ny fomba mihantsy amin'ny ankamaroan'ny lalao video, noho izany tsy misy dikany ho azy ireo ny manivana ireo mpamorona atiny izay mampiseho ny tenany amin'ny fomba mitovy.
Toetran'ny firaisana ara-nofo amin'ny lalao video nantsoina tamin'ny torolàlana momba ny twitch vaovao (Sary avy amin'ny Twitch}
Ilay vaovao ny torolàlana dia mandraraka amin'ny fepetra takiana mba hosaronany tsara ny streamers , satria tsy avela ny fitanjahana, ary tsy avela. Nasongadin'izy ireo ihany koa fa ny atiny ara-nofo na mazava dia voafetra ho an'ny 'pôrnôgrafia, firaisana ara-nofo, ary firaisana ara-nofo.'
Mikasika ny fanararaotam-pahefana ataon'ny streamers toa an'i Amouranth sy ny hafa, izay voamarika ho an'ny votoaty tsy mendrika, ny bilaogy Twitch dia milaza mivantana hoe:
'Ny fahitana fa manao firaisana amin'ny olon-kafa dia tsy mifanohitra amin'ny lalànay, ary i Twitch dia tsy handray andraikitra amin'ny fampiharana ny vehivavy, na ny olona manompo anay, noho ny fahitan'izy ireo endrika manintona.'
misy zavatra azo aleha. Tsy misy politika fantatra momba izay vokatr'izany eo amin'ny lisitra mainty. Miaraka amin'ny fahamendrehana mampiavaka azy, ny hany zavatra nazava tsara dia ny tsy mazava na mety haverina amin'ny laoniny ny kaontiko.
- Amouranth (@Amouranth) 18 Mey 2021
ny ny fiarahamonina dia manana fihetseham-po mifangaro momba ny fanitsiana ny tranonkala streaming. Na dia mahatsikaiky ity olana ity aza ny olona sasany, ny hafa kosa mihevitra azy io ho zava-dehibe satria io no vola miditra. Ny ampahany hafa amin'ny vondrom-piarahamonina kosa dia naneho ny ahiahiny amin'ny famelana ny atiny toy izany.
Na dia tsy mpihaino lasibatra amin'ny renirano mafana aza aho, tsy manana olana amin'ity karazana atiny ity aho ary tsy manana olana amin'ny hoe ao amin'ny Twitch.
Mazava fa tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra i Twitch raha toa ka nandrava ny TOS ireo renirano ireo na tsia, izany dia vahaolana mahavariana nefa manam-pahaizana.
- Parker Mackay (@INTERRO) 21 Mey 2021
raha lazaina amin'ny teny hafa, twitch dia hanohy hamela ny fantson-drano mafana pic.twitter.com/5BsVd1FUO3
- XSET Vrax (@Vraxooo) 21 Mey 2021
Ny zava-misy fa tsy maintsy nanavao na inona na inona ho an'ny olona mikoriana ao anaty pisinina na fandroana i Twitch dia tena wild.
Mampitolagaga ihany koa ny habetsahan'ny olona mody manome tohin-jaza.
- ✨Mira (@Xmiramira) 21 Mey 2021
Ry @Twitch somary diso fanantenana aho tamin'ny sokajy pisinina, fandroana mafana ary torapasika vaovao. Ny tsy fisian'ny safidy Slip an 'Slide dia mahatsapa ho toy ny fanaraha-maso.
Amboary azafady, misaotra. pic.twitter.com/nJYtb3uRH3
- Kahlief Mitady Badge Adams Digital (@Kahjahkins) 21 Mey 2021
Heveriko fa i Twitch dia efa nanadino ny toa fandroana tena izy, mampanantena anao aho fa tena tsy mitovy amin'ny farihy kely misy rano eran'ny kapoaka ao anatiny.
Eto, avelao aho hanampy anao. pic.twitter.com/MPtYEwHqL8
- Kristen | Lalaina (@Loka_lalaina) 21 Mey 2021
Twitch dia nanao sokajy iray manontolo ho an'ny streaming amin'ny Hot Tub. Mahatalanjona mora foana amin'ny endriny.
Handray an'io Trans Tag io isika anio, sa tsy izany? Ny tiako holazaina dia misy fialantsiny aotra intsony. https://t.co/IdWl21Gtvz
- Miabyte Miabyte LIVE IZAO @ Twitch.tv/Miabyte ️‍⚧️ (@themiabyte) 21 Mey 2021
Tsy azoko antoka hoe halako ohatrinona ny fankahalana azoko amin'ity, fa ity kosa:
Tsy ho sosotra na ho sosotra amin'ny vehivavy mihitsy aho noho ny fahazoana ny sakaosiny, tsy andro iray amin'ny fiainako.
Na izany aza, tena mino aho fa tsy an'ny Twitch ny fantsom-pahatafana.
Mahatsiaro ho toy ny fanararaotana diso amin'ny sehatra io.
- MoR Hvntress (@HvntressX) 21 Mey 2021
Ny vondrom-piarahamonina dia toa mizara roa amin'ny antoko miantso an'i Twitch hanaisotra ny fantsom-pandrobana tanteraka, ireo izay manohy miantso azy io hamela azy ireo na dia misy fetra kely aza, ary ny hafa izay miantso an'i Twitch hifantoka amin'ny olana lehibe kokoa toy ny famoronana. an'ny Tag Mpamorona Trans.
Amin'ny faran'ny andro, ny tsipika misy eo amin'ny sivana sy ny fananganana sehatra azo antoka ho an'ny sokajin-taona rehetra dia tsara. Rehefa mitady valiny amin'izay tsy maotina na maloto fitondran-tena ianao, ny fanontaniana lehibe kokoa dia ny hoe iza no mamaly azy.
Na eo aza izany, ny lahatsoratra bilaogy nozarain'i Twitch, izay nandrakotra an'izany rehetra izany ary avy eo somary nifarana tamin'ny fanomezan-toky ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonin'izy ireo fa tsy izany no faran'ny fanapahan-kevitra mifantoka amin'ny tub mafana.
fihaonana amina bandy voalohany
zavatra to rehefa leo ao an-trano
iza no cm punk manambady
zavatra hanatsara ny fiainanao
maninona isika no mitomany rehefa malahelo olona